Ny OnePlus 9 Pro dia miseho amin'ny sary tena izy talohan'ny nanombohany | Androidsis
Betsaka ny tsaho miresaka momba ny fiasa sy ny pitsopitsony teknikan'ny ny OnePlus 9 manaraka. Maro amin'ireo famoahana azontsika momba ireo telefaona ireo no ahitana ny tsara indrindra sy ny fandrosoana indrindra, amin'ny fomba hafa. Na izany aza, misy ny tatitra sasany mifanipaka, ka mamela ho be vinavina fotsiny. Ary ilaina ny mitadidy ao an-tsaina fa mbola tsy misy ny fanambarana ofisialy momba ireo finday ireo, ka mety ho marina daholo na tsia.
Toy izany koa, na dia tsy afaka mandray zavatra tsy misy dikany aza isika amin'izao fotoana izao, ny vaovao izay tafaporitsaka noho ny OnePlus 9 Pro mamporisika antsika hanao izany, satria nisy ny sary namboarina ho maodely efa lasa izay manondro ny mampiavaka azy, ny fisehoany ary ny zava-misy mahaliana momba ilay fikambanana izay nataon'ny mpanamboatra finday finday miaraka amin'i Hasselblad ho fampiharana ny rafitry ny sarin'ny finday.
Ity no mety fisehoan'ny OnePlus 9 Pro
Ilay mpanafika izay omentsika ny kaonty amin'ity sary manaraka ity dia i youtuber Dave Lee, izay, raha ny filazany, nizara ny sary tamin'ireo mpampiasa Discord.
Tsy afaka manantena kely amin'ny OnePlus 9 Pro isika. Ity fitaovana ity, miorina amin'ny inona ilay mpanolotsaina miavaka amin'ny horonantsary, ho avy izy miaraka efijery miolaka izay, hampiantranoana ny fakantsary selfie izay hireharehany, dia hanana lavaka nolavahana, raha ho an'ny rafitra fakana sary any aoriana kosa dia hampiseho vera miolakolaka miolakolaka izay mametraka fanamboarana fakantsary efatra.
Ny fakan-tsary any aoriana dia misy sensor lehibe roa, ny iray eo ambonin'ilay iray hafa, ary ny roa kely apetraka mifanila aminy. Ny tranon'ny fakantsary koa dia misy ny flash LED, ny rafitra mifantoka amin'ny laser, ary ny lavaka kely misy grille izay inoana fa misy mikrô ao anatiny. Manamafy izany ireo sary ny OnePlus 9 Pro dia tsy tena hanasongadina fakantsary fakantsary periskope satria boribory avokoa ny sensor rehetra, na dia izany aza dia tsy maintsy hohamafisinay avy eo.
Mampiseho ihany koa ireo sary fa ny OnePlus 9 Pro dia manana seranan-tsambo USB-C eo ambany ary apetaka amin'ny fantsom-batana SIM sy ny vilan'ny mpandahateny amin'ny lafiny roa. Azontsika atao ihany koa ny mahatsikaritra fa ny finday avo lenta avo lenta dia manana endriny miolakolaka manodidina ny bokotra slide Alert Slider ary ny bokotra herinaratra eo amin'ny ilany ankavanana.
Araka ny toetra sy ny masontsivana teknika izay efa hita tsy nisy sazy, ny fikirakirana ny efijery dia manambara fa ny OnePlus 9 Pro dia manana tontonana manana vahaolana QuadHD + 3.120 x 1.440 piksel. Amin'ny alàlan'ny fikirakirana finday, ny mpampiasa dia afaka misafidy raha hametraka ny vahaolana amin'ny efijery amin'ny QHD + na FHD + (2340 x 1080 teboka) na hiova ho azy ny telefaona amin'ny vahaolana mety hamonjy ny bateria. Ho setrin'izany, 120 Hz ny tahan'ny fanavaozana ambony indrindra azo ekena; ity dia azo soloina amin'ny 60 Hz, izay azo ampiasaina ihany koa.
Farany, ilay fizarana Momba ny telefaona, izay ilay matetika mazàna mametraka antontan-kevitra sasany momba ny toetra mampiavaka ilay fitaovana, dia mampiseho OnePlus 6T fa tsy solontenan'ny OnePlus 9 Pro, izay liana fatratra. Ho fanampin'izany, tsy avelany ho fantatsika ny processeur, ny mombamomba ny fakan-tsary ary ny famaritana ny efijery mitovy.
Zava-misy iray hafa mahaliana ihany koa - ary hafahafa ihany- dia ny fahatsiarovana RAM dia voalaza fa 11 GB (mety ho fahadisoana izany) ary ny habaka fitahirizana anatiny an'ny finday avo lenta dia 256 GB fitehirizana. Miaraka amin'ity farany ity dia manombatombana izahay fa tsy ho azo velarina izany, ka tsy hanana slot karatra microSD; ny finday dia havoaka miaraka amin'ny fanoherana ny rano IP68.
Manantena izahay fa ho tonga miaraka amin'ny Snapdragon 888, Sehatra finday matanjaka indrindra an'i Qualcomm ankehitriny. Na izany aza, izay rehetra voalaza dia tsy maintsy hamafisin'ny mpanamboatra any aoriana, izay tsy ho ela, satria ny fanombohana ny andiany OnePlus 9 dia antenaina hotontosaina amin'ny volana martsa, ary kely sisa no sisa tavela amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Toy izao no fijerin'ny OnePlus 9 Pro amin'ny sary tena izy: ny endriny sy ny fakantsary hampiasainy dia voasivana [+ Video]
Ireo no telefaona mahomby indrindra ankehitriny
Ny hetsika ataoko ao amin'ny Google: Ahoana ny fomba hampiasana ny maody maizina